Ololuhu Marna Xaaraan Maaha Sanad Doorashana Haba-sheegin | Marsa News
Ololuhu Marna Xaaraan Maaha Sanad Doorashana Haba-sheegin
September 9, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Mujaahid Cali guray Oo ka mida siyaasiyiinta waawayn ee xusbiga kulmiye isla markaana ah siyaasiyiinta ugu saamaynta badan somaliland oo waliba inta badan wakhtigiisa galiya inuu bulshada u iftiimiyo hadba waaqica siyaasiga ah ee tagan, mujaahid cali guray oo ka hadlaya ololaha siyaasadeed ayaa barkulanka bulshada ee facebook barta uu ku leeyahay kaga faalooday ololaha waxaanu u dhignaa qoraalkiisu sidan.
Erayga “OLOLE” wuxu u baahan yahay tafsiir sharci waayo dad ayaa u fahmay in aanay xisbiyadu safaro geli karin taageero raadis iyo wacyi gelin ah oo aanay ku mari karin gobolada iyo degmooyinka dalka. Sida caadiga ah sanadka ugu dambeeya muddo xileedka Madaxwaynaha waxa loo yaqaan sanadka kaambaynka (Campaign Year) mucaarid iyo muxaafidba waxay ahmiyadda siiyaan sidii ay u kasbi lahaayeen taageerada ugu badan ee codbixiyayaasha. Banaanbaxyada maalmaha ugu dambeeyaa ee Kaambaynka rasmiga ah waa dhoolo-tusyo uu xisbi waliba isku muujinayo oo ku muujinayo taageerada uu ka haysto dadwaynaha inta badanna marka laga tago dadka xisbiyada kala raacsan cidda la doonayo in lagu kasbo taageeradoodu waa dadka aan go’aanka weli qaadanin(undecided votes). Xiliyadii diiwaangelinta wacyigelintu xuduudda keliya ee sheegani waxay ahayd in aan astaamo xisbi la qaadanin waana run oo waa la qaatay taasina waa la odhan karaa xadgudub. Wixii kale oo dhami waa masmuux caadina way ahayd. Waynu ognahay iyada oon xili doorashoba ahayn in xisbigii doonaa uu gobolada iyo degmooyinka uu booqasho ku tegi jiray iyaga oo wata astaamihii xisbigooda.
Sida aan filayo kaambaynka rasmiga ah wuxu bilaabmayaa marka uu si rasmi ah Komishanka Doorashooyinku u iclaamiyo oo laga yaabo inay noqoto muddo 21 cidho ah oo xisbi waliba xaq u yeelanayo 7 maalmood uu dibadbaxyo samayn karo warbaahinta dawladdana wakhtiyo is le’eg laga siin doono.
Hadaba mucaaridka cabashadiisu marka keliya ey wax ka soo qaad yeelan kartaa hadii ay jiro waa marka ay si buuxda u cadayn karaan in gaadiidka dawladda uu Kulmiye xisbi ahaan u adeegsado oo uu hawlihiisa xisbi u isticmaalo xukuumadduse waa wax kale oo lama odhan karo wasiir hebel oo hawlo uu u xil saaran yahay u tegay meel heblaayo waa Kulmiye ee muxuu u isticmaalayaa gaadiidka dawladda, ka soo qaadba wacyigelintii diiwaangelinta iyo hawlo kormeer oo isku soo beegmay ama isku xiliba noqday. Xiliyada doorashada waa caadi in mucaaridku ku eedeeyo xibul xaakimka inu isticmaalayo hantidii dadwaynaha iyaga oo haynin wax la taaban karo oo cadaymo ah hadii ay jirto iyo hadii aanay jirin mar kasta way odhanayaan oo marna wax ruhun saari kara oo qancin karaa ma jirto waayo eedaynta lafteeda ay ka badh ah ololahooda ka mucaarid ahaan.